एमसिसी हाम्रा लागि एउटा अवसर हुन सक्छ - Ujyaalo Nepal
एमसिसी हाम्रा लागि एउटा अवसर हुन सक्छ
By ujyaalo	 Last updated Jan 19, 2020 26
सेनालाई प्रश्नः राज्यकोषको ढुकुटी लुट्नेलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ?
हाम्रा नेताहरू ६० किलोको माला, विशाल केक, ठूलठूला दलबल किन चाहनु हुन्छ ?
पार्टी एकताका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने सम्बन्धमा छलफल भएको अब कहिले सुन्न पाइने ?
उपाध्यक्ष डा. गिरीको असक्षमताका उदाहरणः पंगु बनाईदै चिकित्सा शिक्षा आयोग